Mahajanga : Mampiantrano ny fivoriambe ataon'ny Filan-kevitra Ambony ho an'ny Mpitsara
jeudi, 30 septembre 2021 20:35
Tanterahina ao an-drenivohitry ny faritra Boeny ny 29 sy 30 Septambra ary ny 1 Oktobra 2021 ny fivoriambe ataon'ny Filan-kevitra Ambony ho an'ny Mpitsara na CSM. Nanokatra izany tao an-toerana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana sady filoha lefitry ny CSM, Imbiki Herilaza.
Ny Filankevitra Ambonin’ny Mpitsara dia rafitra manaraka ny Lalampanorenana miantoka ny fahaleovantenan’ny Fitsarana sy ny mpitsara, ny fanajana ny « code d’éthique » sy ny « code de déontologie » ary ny fitantanan’asan’ny mpitsara.
Ho fampiharana ny andininy faha-9 ao amin’ny lalàna fehizoro, laharana 2007-039, tamin’ny 14 janoary 2008, momba ny Filankevitra Ambonin’ny Mpitsara, izay milaza fa tokony hivory farafahakeliny isaky ny roa volana ny filankevitra, dia tafiditra ao anatin’izany ity tanterahina ao Mahajanga ity.
Mba ho fanamafisana sy fanamoràna ny fifandraisana eo amin’ny samy mpitsara am-perinasa manerana an’i Madagasikara no anton’izao fihaonana izao, ary mikasa ny mba hisian’izany matetika eo amin’ireo mpitsara.
Henoina mandritra io fihaonana io ny hetahetan’ireo mpitsara sy ny olana atrehan’izy ireo. Hampatsiahivana azy ireo ihany koa ireo fitsipi-pitondran-tena mifehy azy sy ny asany mba hanatsarany ny fomba fiasany, ka hahafahan’ny vahoaka mamerina indray ny fitokisany amin’ireo mpisehatra samihafa eo amin’ny Fitsarana.
Nisy ny dinikasa niarahan’ny minisitra tamin'ireo Mpitsara rehetra eo anivon'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI), ny Fitsarana Ambony, ny Fitsarana misahana ny ady amin'ny Fanjakana (TA), ny Fitsarana ara-bola (TF), ary ny Tendro Iadivana amin'ny Kolikoly (PAC) ; nisy koa ny dinikasa niarahany tamin'ireo Mpiraki-draharaha.
Nitsidika ny Akany (Centre pour les mineurs) Anjarisoa ao Amborovy ihany koa ny delegasiona notarihin’ny mpitahiry ny fitombokasem-panjakana minisitry ny fitsarana taorian’izay.